August 12, 2019 - Myitter
ခရီးသွားအများပြည်သူများခင်ဗျား… မန္တလေးသို့ အချိန်လင့် ညဉ့်နက်ပိုင်းရောက်လျင်
August 12, 2019 Myitter 0
ခရီးသွားအများပြည်သူများခင်ဗျား… မန္တလေးသို့ အချိန်လင့် ညဉ့်နက်ပိုင်းရောက်လျင် ခရီးသွားအများပြည်သူများခင်ဗျား…မန္တလေးသို့ အချိန်လင့် ညဉ့်နက်ပိုင်းရောက်လျင်ကိုယ်နှင့်မသိသော-မရင်းနှီးသော ဆိုင်ကယ်-သုံးဘီး-အငှားယာဉ်များဖြင့်…. ညပိုင်းတွင် (လုံးဝ) (လုံးဝ) အခြားနေရာများသို့ အထူးသဖြင့် #ကားကြီးဝင်းတစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ ကယ်ရီဖြင့် မကူးပြောင်းကြပါရန်…. နံက်မိုးလင်းသည်အထိ နီးရာဆိုင်တွင် စားသောက်၍ အနားယူနေကြပါရန်….. အကယ်၍ အချိန်လင့်ညပိုင်းတွင် သင်မသိသော ကယ်ရီ […]
သူတော်ကောင်း၊အလေးဂရုပြုထိုက်သူ၊ မိမိတို့ထက် သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာသာတဲ့သူကိုပြစ်မှားလို့ တစ်တိုင်းပြည်လုံး ပျက်စီးသွားတဲ့
” ကိသဝစ္ဆ ရသေ့အကြောင်း ” လူမုန်းရင် ပုန်းလို့ရတယ်၊ကံမုန်းရင် ပုန်းလို့ကိုမရတာ။သူတော်ကောင်း၊အလေးဂရုပြုထိုက်သူ၊ မိမိတို့ထက် သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာသာတဲ့သူကိုပြစ်မှားလို့ တစ်တိုင်းပြည်လုံး ပျက်စီးသွားတဲ့ သာဓကသမိုင်းကြောင်းတွေရှိပါတယ်။ ရှေးအခါက ကုမ္ဘဝတီမြို့မှာဒဏ္ဏာကီမင်း အုပ်ချုပ်နေချိန်ပေါ့။ထိုအချိန်မှာ စစ်သူကြီးက ကိသဝစ္ဆ ရသေ့ကို ကြည်ညိုပြီး ဥယျာဉ်ထဲမှာ ပင့်ထားခဲ့တယ်။ စစ်သူကြီးက ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်တယ်ပေါ့။ […]
သြဂုတ် – ၁၂ ရွှေကုန်သည်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ တူအဖြစ် ဟန်ဆောင် ဖုန်းဆက်ကာ မန္တလေးမြို့ရှိ အောင်သမာဓိရွှေဆိုင်မှ ကျပ်သိန်း(၁၂၀)ကျော် လိမ်ယူ ထုတ်ယူသွားသည့် အမျိုးသားကို အဖွင့်ထားပြီး ဖမ်းဆီးနိုင်ရန် စုံစမ်းနေကြောင်း အောင်မြေသာစံမြို့မ ရဲစခန်းမှသတင်းရရှိသည်။ မန္တလေးမြို့ ၊ အောင်မြေသာဇံမြိ်ု့နယ် (၂၅) လမ်း၊ (၈၈) လမ်းနှင့် […]
မြေပြိုသည့်ဘေးမှ လွတ်မြောက်ခဲ့သည့် ကင်းတောင်ရွာသား ဦးချစ်ဝင်
သဘာဝဘေးဒဏ်ခံနေရသည့် မြန်မာလူထုအတွက် ဆန်တန်ချိန် ၃၀၀ ပေးပို့ ခဲ့ တဲ့ ဂျပန်
Zawgy_version သဘာဝဘေးဒဏ်ခံနေရသည့် မြန်မာလူထုအတွက် ဂျပန်က ဆန်တန်ချိန် ၃၀၀ ပေးပို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေကို ကူညီထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ ဂျပန်နိုင်ငံက ဆန်တန်ချိန် ၃၀၀ ပေးပို့လှူဒါန်းလိုက်ပါတယ်။ ဂျပန်က လှူဒါန်းတဲ့ ဆန်တွေ ဩဂုတ် ၃ ရက်က ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ဩဂုတ် ၉ […]
ဆိုင်ပိုင်ရှင်ရော ဝန်ထမ်းတွေပါ အရှင်လတ်လတ် မြေပြိုတဲ့ထဲ ပါသွားတဲ့ ရင်နင့်ဖွယ်အဖြစ်ဆိုး
ဆိုင်ပိုင်ရှင်ရော ဝန်ထမ်းတွေပါ အရှင်လတ်လတ် မြေပြိုတဲ့ထဲ ပါသွားတဲ့ ရင်နင့်ဖွယ်အဖြစ်ဆိုး သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဟာ ကြောက်ဖို့ကောင်းသလောက် ဘာမှကြိုတင်ပြင်ဆင်ချိန်မရလောက်အောင် အားလုံးကို ရက်စက်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရဖြစ်တဲ့ မွန်ပြည်နယ်လေးကတော့ သဘာဝဒဏ်ကို အလူးအလဲခံနေရပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း လူပေါင်းများစွာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသလို ဒဏ်ရာရှိသူတွေလည်း မနည်းမနောပါပဲ။ အဲဒီထဲကမှ ပိုပြီးရင်နာဖို့ကောင်းတဲ့အဖြစ်လေးကတော့ HIGHWAY KING Indian […]
တောင်ပြိုမှု့မှ မိသားစု ၈ယောက်လုံးသေပြီးတစ်ယောက်ထဲကျန်ခဲ့တဲ့ သမီးလေးကို ဝိုင်းကယ်ကြရအောင်ဗျာ ◾စိတ်မကောင်းဘူး ညီမလေး၇ယ်. . . တောင်ပြိုမှု့မှ မိသားစု ၈ယောက်လုံးသေပြီးတစ်ယောက်ထဲကျန်ခဲ့တဲ့ သမီးလေးကို ဝိုင်းကယ်ကြရအောင်ဗျာ. . . .။ အခုလက်၇ှိ မော်လမြိုင်ဆေး၇ုံမှာ ဆေးကုသနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ ကလေးမရဲ့ဇာတိက မွန်ပြည်နယ် ပေါင်မြို့ သဲဖြူကုန်းကျေး၇ွာအုပ်စု ကံဖြူကျေး၇ွာကလို့သိ၇ှိရပါတယ်. […]
သံဃာတော်များရဲ့ စေတနာ၊ကရုဏာ၊မေတ္တာတွေဟာဒကာ/မတို့အတွက် အမြဲအသင့်ရှိနေတတ်တယ်။ရေဘေးဒဏ်သင့်ဒကာ/မတွေကိုထောက်ပန့်လှူဒါန်းချင်လို့ ကိုရင်ငယ် စာသင်သားတွေ စုထား သိမ်းထားတဲ့ နဝကမ္မအနုတ်လေးတွေကို ထုတ်နေတာပါ။တချို့ကတော့ကျောင်းပိတ်ရက်ရွာပြန်ရင် ဝတ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ သေတ္တာထဲသေခြာသိမ်းထားတဲ့ သင်္ကန်းလေးကိုတောင် ခဝါသည်ဆီ ဈေးနှိမ်ခံပြီးရောင်းလှူတယ်။ ကိုရင်တပါးဆိုရင် သူမှာထောက်ပံ့လှူစရာ ဝတ္ထုလည်းမရှိ ရောင်းစရာသင်္ကန်းလည်းမရှိတော့ ရှိတဲ့ဆပ်ပြာတွေ ဆပ်ပြာမှုန့်တွေကို ကျောင်းရှေ့က ဈေးဆိုင်မှာ သွားရောင်းပြီး လာလှူတယ်။ ဒါကို […]
မိတ်​ကပ်​ မကြိုက်​တဲ့ လူကြီး (အခုမှ ဒါမျိုး ကြားဖူးတယ်​)
”မနက်ဖြန် နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ လာကြည့်ဖို့ရှိတယ်။ မင်းတို့ တွေ မနက် ၇:၀၀နာရီ ရောက် အောင်လာပါ…” လူကြီးလာမယ့်မနက်မှာ အားလုံး မနက် ၇:၀၀နာရီကတည်းက ရုံးကို ရောက်နေကြသည်။ ”အေး သန့် ရှင်းရေးသေချာလုပ်ထား။ အပြောမခံရစေနဲ့ ” မနက် ၇နာရီကတည်းက stand […]